Arya Stark ၏အသွင်ပြောင်းမှု
ကျေးဇူးပြု၍ HD ဖြင့်ကြည့်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံအတွက်
LIKE, COMMENT, နောက်ထပ် SUBSCRIBE!
မင်းဒီဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ/သုံးချင်ရင်/တခြားဆိုဒ်တွေမှာဒီပိုစ့်ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအမြဲ credit ပေးပါတယ်။
တည်းဖြတ်ရုံနဲ့တော့ငါဘာမှမပိုင်ဘူး! ဗီဒီယိုအားလုံးသည် HBO ပိုင်ဖြစ်သည်။
Fandom: Thrones ၏ဂိမ်း
က Character: Arya Stark
သီချင်းများ: https: //www.youtube.com/watch v = f78n1 ... https:? //www.youtube.com/watch v = RQ5RO ... https: //www.youtube.com/watch?v=UtscI ... https: //www.youtube.com/watch? v = l9qPp ... https://www.youtube.com/watch?v=2k43T ။ .. https: //www.youtube.com/watch? v = ZnPaa ... https: //www.youtube.com/watch? v = ZC5wU ...
အစီအစဉ်: Sony Vegas Pro 13
ငါဒါကိုလုပ်နေတာကိုမယုံဘူး။ ဤအရာသည် GOT ၏အဆုံး၊ Starks ၏အဆုံးမဟုတ်၊ အထူးသဖြင့် Arya မဟုတ်ချေ။ သူတို့ကတံခါးပိတ်လိုက်ပေမယ့်အနာဂတ်မှာအခြားအရာတစ်ခုအတွက်ပြတင်းပေါက်ကိုသေချာပေါက်ထားခဲ့တာကြောင့်တစ်နေ့နေ့မှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကသူမနဲ့ Starks အကြောင်းလှည့်စားသွားလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ အခု Arya အကြောင်း ... သူမဟာပထမနေ့ကတည်းကငါအကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီ ၈ နှစ်တာကာလအတွင်းသူမရဲ့ခရီးကိုငါလိုက်ခဲ့တယ်၊ သူမအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအခြေခံအားဖြင့် Christopher Columbus ဖြစ်လာခဲ့တာကိုငါကျေးဇူးတင်တယ်။ သူမဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာငါအမြဲတွေးခဲ့တယ်၊ သူမဟာစစ်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်သူဘာလုပ်မယ်၊ ထွက်သွားတာနဲ့ခရီးထွက်တာဆိုတဲ့အတွေးကငါ့ကိုတကယ်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိဘူး။ အခုငါမြင်ဖူးတယ်၊ ငါဒီလမ်းထက်သွားရတာပိုကောင်းတဲ့လမ်းမရှိဘူး။ပြပွဲ၏လတ်တလောအပိုင်းအချို့ကိုစိတ်ပျက်မိသည်၊ Starks အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးသူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအုပ်ချုပ်နေသောကြောင့် ၀ မ်းမြောက်ပါသည်။ သူတို့ကတကယ့်ပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးအဲဒါရဲ့အမာခံဖြစ်လိမ့်မယ်။ House Stark of Arya ရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုကြိုက်ပြီးသူတို့ဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အခန်းသစ်ကိုဂုဏ်ပြုကြလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
https: //: https://discordapp.com/invite/EbCpSVb
𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚: ➟ https: //www.instagram.com/insidious.g ...
၁၉၇၆ ခုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၇ အရမူပိုင်ခွင့်ကိုငြင်းဆိုခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ သတင်းတင်ပြခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း၊ ပညာသင်ဆုနှင့်သုတေသနကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တရားမျှတသောအသုံးပြုမှုကိုပြုလုပ်သည်။ အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ ပညာရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုသည်မျှတသောသုံးစွဲမှုအတွက်မျှခြေကိုညွှန်ပြသည်။
Jon Snow Kills အားလုံး (Thrones of Game, Jon Snow, Kills)
Ancient Stark လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် Game of Thrones Season 8 ၏အဆုံး
Astapor ရှိ Daenerys
KHALEESI: Daenerys Targaryen ၏ပုံပြင်
သရုပ်ဆောင်သည်သတိရသည် Game of Thrones: Season 8 (HBO)
အားလုံးသော Stark ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှု (Thrones of Game, Starks Reuniting)
"Game of Thrones" မှ Lady Olenna (43 ကြိမ်) Lady Olenna သည် Shade of Queen (ထပ်တိုးသည်)
Mike Tyson - ဒဏ္Legendာရီ၏ Knockouts အားလုံး
Sansa: Winterfell ၏ Red Wolf
Arya Stark // ငါဘာတွေဖြစ်လာလဲကြည့်ပါ
SUPERCUT: Thrones of Game of Thrones တွင်အထိတ်လန့်ဆုံးအခိုက်အတန့်များ
Bjorn သည်နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲ ၀ င်သည် ဗိုက်ကင်း | ဗီဒီယိုချုပ်
နာမည်ကြီးရယ်စရာကြော်ငြာ ၁၀ ခု
Tyrion Lannister - ဘုရင်၏လက်
Lannister သေခြင်းအားလုံး (Thrones of Deaths, Lannister Deaths)
Game of Thrones - Season7(ပြန်လည်စုစည်းမှု)
(GoT) Sansa Stark || ငွက္ကေလး
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်အစောပိုင်းနှစ် ၉၀ ကလူတစ်ယောက်ကိုနိုးစေသော်လည်းသူတစ်ယောက်တည်းမနေနိုင်
Daenerys နှင့် Dragon Kills အားလုံး (Thrones of Game, Daenerys Targaryen, Dragon Kills)